Maxaa U Dawo Ah Finanka Wajiga (Acne)? - Daryeel Magazine
Maxaa U Dawo Ah Finanka Wajiga (Acne)?
Finanka (acne) waxa ay ka soo bixi karaan sanka kaliya ama wajiga oo idil, waxayna ka dhashaan qanjirro maqaarka ku dhex abuuran oo aad u yaryar oo soo saara dheecaan saliid ah oo maqaarka subkiya, qanjiradaas ayaa ka xirma afka kadibna bararaan markii la riixane waxaa ka soo baxa wax cad oo adag oo dadka qaar ay moodaan malax.
Qaar ka mid ah sababaha keena finanka:
Qofka oo wajigiisu nooca dufanka isla markaana aan aqoon sida loo nadiifiyo.
Qofka oo marka uu wajiga dhaqanayo xoog uruga wajiga taas oo keenaysa in qanjiradii soo daynaye dufanka in ay sii siyaadshaan
Hurdo yaridu waxay ka mid tahay waxyaabaha ka qeyb qaata finanka wajiga
Qofka oo finkii kasoo baxaba ganaha la’aada kadib dillaaciya taas oo keenta meeshii in raad kuharo madoow ah
Heerka hormoonada qofka
Qofka oo aan hurdo iyo nasiino fiican helin hadana kudarsada fakkar iyo welwel.
Hababka Dabiiciga ah ee loo Daaweeyo Findoobka:
Biyaha Liin dhanaanta: waxay u fiican yihiin baaba’inta summadda finanka, si doo kale waxaa ku jira fitamin C badan, kaas oo ka dhigaya maqaarka mid siman oo iftiimaya Mari biyaha liin maqaarka xiliga fiidkii. Kadib dhaq 20 daqiiqo kadib adigoo isticmaalaya biyo diiran.
Khalka Tufaaxa: Waxaad isticmaali kartaa khalka tuffaaxa adiga oo isticmaalayaa suuf ama cudbi midkaa utaqaan kana fogeenaya gacnaha wajiga khaasatan finka.
Dacarta: Dacartu waxay leedahay dawo wanaagsan, waxay ka hortag taa caabuqa iyo saameynta bakteeriyada, sidoo kale waxay hormarineysaa dib usoo kabsashada maqaarka. Dacarta kala jeex, oo mari wajiga waxa jiijiid meysa ee ka imaneysa meesha adka kala jeexda, ama soo iibso jelka ka sameysan dacar boqolkiiba boqol, oo mari meesha maqaar ee finanka leh ama guduudatay.
Maxaa ufiican finanka raadka uureebo sida madmadowga iyo daldaloolada?
Waxa aad tijaabin kartaa ukunta qeybteeda cad iyo qaaddo aad uyar liin dhanaan iyo 1 qaaddo oo malab asli nadiif ah, intaa ayaa isku garaacaysaa kadib wajiga ayaad marinaysaa sug inta uu ka qallalayo 15 illaa 20 min. Waxaad isticmaali kartaa 1 mar maalintii muddo 2 week adiga oo aan isticmaalayn wax saabuun ama waxyaaba kale.
Ma Rabtaa Wax Dabiici Ah Oo Wajiga Kuu Nuuriya? Alaab Dabiici Ah Oo Caawisa Wajiga Saliida Iyo Finanka leh Maxaa Haaraha Dawo U Ah? Daldaloolada Wajiga (Open Pores)